NJEHIE: MELITE Ọ BỤGHỊ NA KỌMPUTA A - WINDOWS - 2019
Dozie njehie ahụ "Mmelite adịghị arụ ọrụ na kọmputa a"
Njehie na ọdịdị nke BSOD - "ákwà nchara anụnụ anwu nke ọnwụ" - ime n'ihi nsogbu dị egwu na ngwaike ma ọ bụ ngwanrọ nke usoro ahụ. Anyị ga-etinye ihe a na nyocha nke ihe kpatara BSOD na koodu 0x0000007e.
Wepụ ihe na-acha anụnụ anụnụ 0x0000007e
Ihe mere eji eme ka njehie a ghọọ "ígwè" na ngwanrọ. Ihe kacha sie ike ịchọta ma kpochapụ ya, ebe ọ bụ na nsogbu dị nnọọ ukwuu. Ndị a bụ ihe nkedo kachasị na nhazi ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala usoro. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ "dị mfe," dịka ọmụmaatụ, enweghị ohere n'efu na draịvụ kọnfụl ma ọ bụ kaadị vidiyo.
A pụrụ ịkpọ njehie n'ozuzu ya, nke na-enye gị ohere iji ntuziaka sitere na isiokwu dị na njikọ dị n'okpuru ebe a. Ọ bụrụ na ndụmọdụ ahụ ewetaghị ihe ị chọrọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-alọghachi ebe a ma gbalịa dozie nsogbu ahụ na otu n'ime ụzọ ndị a (ma ọ bụ na nke niile).
Gụkwuo: Idozi nsogbu nke ákwà nchara na-acha anụnụ anụnụ na Windows
Ebumnuche nke 1: Mgbagha mbanye
Site diski ike na nke a, anyị ghọtara ụgbọala nke "folda" Windows ahụ, nke pụtara na osetịpụtara OS. Ọ bụrụ na ezughị ezu ohere n'efu na ya iji mepụta faịlụ oge nwa oge mgbe ị na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ, anyị ga-enweta ndahie n'ụzọ nkịtị. Ihe ngwọta dị mfe: ịhapụ ohere nchekwa site na ihichapụ faịlụ na mmemme na-enweghị isi site na iji CCleaner.
Idozi njehie ma wepu ahihia na kọmputa na Windows 7
Ọ bụrụ na BSOD na-amalite mgbe Windows malitere, mgbe ahụ, ị ​​ga-achọ iji otu n'ime nkesa Live na-ehicha ya. Iji dozie nsogbu ahụ, anyị na-agbanye aka n'iwu ERD, ị ga-ebu ụzọ weghaara ya, wee degara eriri USB, nke a ga-ebugo.
Na-eduzi ịmepụta bọtịnụ ọkụ na ERD Commander
Hụ BIOS ịkwalite si na windo mbanye
Mgbe akụ na-agbanye, anyị na-ahọrọ ikike nke usoro anyị - 32 ma ọ bụ 64 ibe na pịa Tinye.
Anyị na-ebute njikọ netwọk na ndabere site na ịpị "Ee". Omume a ga-enye anyị ohere iji draịva netwọk (ọ bụrụ na ọ bụla) ịkwaga faịlụ.
Ọzọ, ị nwere ike ikwe ka ihe omume ahụ weghachite akwụkwọ mpịakọta, ma nke a adịghị mkpa, ebe ọ bụ na anyị maara ụgbọala nke na-arụ ọrụ. Anyị pịa "Ee" ma ọ bụ "Mba".
Họrọ nhazi keyboard.
Mgbe ERD chọpụtara usoro arụnyere, pịa "Na-esote".
Pịa na ihe kachasị na menu nke meghere - "Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset".
Ọzọ, gaa "Explorer".
Na ngọngọ aka anyị na-achọ nchekwa na nchekwa. "Windows".
Ugbu a, ọ dị anyị mkpa ịchọta na ihichapụ faịlụ ndị na-adịghị mkpa. Nke mbụ bụ ọdịnaya. "Nkata" (folda "$ Recycle.Bin"). Ịkwesighi imetụ folda ahụ aka, mana ihe niile dị na ya ga-ehichapụ.
Ihe ọzọ "n'okpuru mma" bụ faịlụ na nchekwa dị ukwuu na vidio, foto na ọdịnaya ndị ọzọ. Ọtụtụ mgbe, ha dị na folda onye ọrụ.
Akwụkwọ mpịakọta: Ndị ọrụ gị Aha njirimara gị na Account_ Entries
Akwụkwọ ndekọ nyocha mbụ "Documents", "Desktọpụ" ma "Downloads". I kwesịkwara ịṅa ntị "Videos", "Egwú" ma "Foto". N'ebe a, ị ga-ejikwa naanị ọdịnaya ahụ, ma hapụ akwụkwọ ndekọ aha ebe.
Ọ bụrụ na faịlụ enweghị ike ihichapụ ma ọlị, ịnwere ike ịnyefe ha na diski ọzọ ma ọ bụ na mbụ (tupu nbudata) ngwa kọmputa USB ejikọta. A na-eme nke a site na ịpị akwụkwọ PCM na ịhọrọ ihe omume menu ihe kwekọrọ na ya.
Na windo nke mepee, họrọ mgbasa ozi nke anyị na-eme atụmatụ ịkwaga faịlụ ahụ, wee pịa OK. Usoro nwere ike iwe ogologo oge, dabere na nha akwụkwọ edemede.
Mgbe i mechachara omume niile, ị nwere ike buutu usoro ma wepu mmemme ndi na-adighi mkpa site na iji ngwa oru ma obu software di iche iche.
Gụkwuo: Ịwụnye na iwepu mmemme na Windows 7
Ebumnuche 2: Kaadị Video
Ihe ntanetị nwere ike imetụta nkwụsi ike nke usoro dum, tinyere njehie 0x0000007e. Ihe kpatara ya nwere ike ịbụ ọrụ na-adịghị mma nke ọkwọ ụgbọala vidiyo, ma anyị ga-ekwurịta ya mgbe e mesịrị. Iji chọpụta ihe na-adịghị mma, ọ bụ iji kwụpụ kaadị ahụ na PC ma nwaa os. Enwere ike inweta foto a site na ịgbanye ihe nyocha ahụ na njikọ kwekọrọ na motherboard.
Kwupu kaadi vidiyo site na komputa
Otu esi eji vidiyo vidio nwere njikọ
Ebumnuche 3: BIOS
BIOS bụ obere programmụ nke na-achịkwa ihe niile ngwanrọ nke usoro ahụ, nke e dekọrọ na bọtịnụ pụrụ iche na "motherboard". Ntọala ezighi ezi na-eduga na njehie dị iche iche. Nke a ga - enyere anyị aka ịtọgharịa ọnụọgụ abụọ.
Ụdị BIOS na-adịbeghị anya nwere ike ghara ikwekọ na ngwaike arụnyere. Iji dozie nsogbu ahụ, ịkwesịrị imelite ngwa ngwa a.
Gụkwuo: Imelite BIOS na kọmputa ahụ
Ebumnuche 4: Ndị ọkwọ ụgbọala
Ihe ngwọta zuru ụwa ọnụ maka nsogbu ịkwọ ụgbọala bụ iji weghachite usoro. N'eziokwu, ọ ga-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ihe kpatara ya bụ software arụnyere na onye ọrụ.
Gụkwuo: Otu esi eweghachi Windows 7
Ihe a na-ahụkarị, ma bụrụ nke pụrụ iche bụ ọdịda na ọkwọ ụgbọala nke Win32k.sys. A na-egosipụta ozi a na otu n'ime bọtịnụ BSOD.
Ihe kpatara omume nke usoro a nwere ike ịbụ ngwanrọ nke atọ maka njikwa na kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-eji ya, iwepụ, ntinye ma ọ bụ dochie anya ihe omume ahụ na analog ga-enyere aka.
Gụkwuo: WiFi Access Remote
Ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọala dị iche dị na BSOD, ịchọrọ ịchọta ozi gbasara ya na Ịntanetị, na-eji nyocha ọ bụla: nke mmemme ya bụ, ebe ọ dị na disk ahụ. Ọ bụrụ na e kpebisiri ike na nke a bụ faịlụ ngwanrọ nke atọ, mgbe ahụ (ngwanrọ) kwesịrị ehichapụ ma ọ bụ weghachite. Ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọelu ahụ, ị ​​nwere ike ịnwa ịmeghachi ya. A na-eme nke a site na enyemaka nke ERD Commander, software ọzọ ma ọ bụ ọrụ SFC.
Gụkwuo: Lelee iguzosi ike n'ezi ihe nke faịlụ faịlụ na Windows 7
Anyị na-ebu isi site na 1 ruo 6 gụnyere paragraf mbụ banyere disk diski.
Họrọ "Ọchịchị Njikwa System".
Anyị pịa "Na-esote".
Na window nke ọzọ, hapụ ntọala ndabara wee pịa ọzọ. "Na-esote".
Anyị na-echere ịmecha usoro, pịa "Emere" ma malitegharịa kọmputa site diski diski (mgbe o guzobere BIOS).
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ụzọ ụfọdụ iji wepụ njehie 0x0000007e, ya mere ọ dị mkpa iji nyochaa ya n'ụzọ ziri ezi, ya bụ, iji chọpụta nsogbu ngwanrọ ma ọ bụ ngwanrọ. Enwere ike ime nke a site na ịmepụta ngwaike - disks na kaadị vidiyo na ịnweta ozi teknụzụ site na njehie njehie.